🥇 ▷ Xiaomi wuxuu ka shaqeeyaa ilaa 4 taleefan oo leh 108 megapixel camera ✅
Xiaomi wuxuu ka shaqeeyaa ilaa 4 taleefan oo leh 108 megapixel camera
Xallinta kamaradaha ayaa sii kordhaya, oo aad iyo aad u badan. Soo-saareyaashu waxay ku khamaaraan dareemayaasha 20, 40, 48 iyo illaa 64 megapixels. Waxaan ku aragnay qaraarkan ugu dambeeya laba goobood oo cusub, sida Redmi Note 8 Pro oo dhowaan lagu dhawaaqay Xiaomi. Laakiin shirkadda Shiinaha waxay dooneysaa inay ku dhaqaaqdo tallaabo dheeraad ah oo leh 108 megapixel camera. Dareemahan uu ku dhawaaqay Samsung isaga oo kaashanaya Xiaomi, wuxuu gaari karaa ilaa afar taleefanno gacmeed cusub oo sumadda ah.
Xiaomi waxay horey u shaacisay inay soo bandhigi doonto aalad leh 108 megapixel camera, oo lagu xamanayo inuu yahay Mi Mix 4. Si kastaba ha noqotee, macluumaad cusub ayaa muujinaya inay qorsheynayaan inay soo bandhigaan ilaa 4 nooc. Barnaamijka kamaradaha MIUI ayaa daaha ka rogay afar nooc oo kuxiran doona dareemahan Samsung.
Iyagu waa magacyo koodhadh ah, sidaas awgeed weli garan mayno aaladda ay yihiin. Mid ka mid ah moodooyinkaas ayaa la filayaa inuu noqdo Mi Mix 4. Mid kale ayaa lahaan kara noocyo 5G nooc ka mid ah calaamada calanka, iyo sidoo kale terminal-yada mustaqbalka ee lagu dhawaaqi karo inta lagu gudajiro 2020.
Samsung ISOCELL Bright HMX waa magaca 108 megapixel sensor. Annagu garan mayno tafaasiil badan oo ku saabsan kamaraddan, laakiin waxa la filayaa in muraayadda noocan ahi ay kuu oggolaaneyso inaad sawirro ku qaaddo tayo sare iyo tafatiran. Intaa waxaa sii dheer, waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa sawir qaadista habeenkii, maaddaama sheybaare leh megapixels aad u fara badan uu noo oggolaanayo inaan qabsanno iftiin badan.
Waxaan sugi doonnaa afarta xarumood ee lagu dhawaaqi doono si aan u aragno noocyada ay yihiin iyo astaamaha kaamirooyinka ay lahaan doonaan.
Via: Soo-saareyaasha XDA.